I-Lane Swatchs - I-Delta Engineering Belgium
Izinsimbi Zokuhlola Zokwehlisa
Ama-Palletizer - ama-Depalletizer
I-Gluing - Foam
Qhathanisa izindleko zesikhwama sekhadibhodi
Ukubalwa kokufakwa kwamaphethini kumabhodlela ayindilinga
Ukubalwa kokufakwa kwephethini kwamabhodlela skwele
Isibalo sokuhlola okuvuza
Okokubala kwamandla aphezulu
Isifundo sokulayisha umsebenzi we-opharetha
Inani Lokubalwa Kwezindleko zePlasma
I-Delta Engineering automation
Ithebula lokuphikiswa Kwezinto
Ukuhlola okuvuthiwe / isisindo
Faka kungobo yomlando kusigaba "Izihambeli Zendlela"
ULwesithathu, 26 Mashi 2014 by Ubunjiniyela beDelta
Isishisi sendlela - imizila emi-1
Lo mshini oshisayo uhlukanisa umugqa ongu-1 ongenayo emigqeni emi-2 ephumayo. Ngale ndlela, uthola isivinini sebhodlela esifanele (esingeqi ngejubane elikhulu lebhodlela ngomgwaqo).
Ishicilelwe ku Izishintshi Zendlela
Umakwe ngaphansi: DSW200, hlukanisa imizila, Imizila emi-1 emi-2, isivinini sebhodlela, isikhungo samandla adonsela phansi, ijubane lebhodlela, hlukanisa imifudlana, imigwaqo eshintshayo, umgwaqo ongamawele, umshini wokushintsha indlela
Umshini oshisayo wejubane eliphezulu - imizila emi-1 ibe-6
Lo mshini oshisayo uhlukanisa umugqa ongu-1 ongenayo ube yimigqa engu-6 ephumayo. Ngale ndlela, uthola isivinini sebhodlela esifanele (esingeqi ngejubane elikhulu lebhodlela ngomgwaqo). Ijubane lonke: 30-72K BPH!
Umakwe ngaphansi: hlukanisa imizila, isivinini sebhodlela, isikhungo samandla adonsela phansi, ijubane lebhodlela, hlukanisa imifudlana, imigwaqo eshintshayo, umshini wokushintsha indlela, DSW600, Imizila emi-1 emi-6, umgwaqo we-hexa
►Izinsimbi Zokuhlola Zokwehlisa
►Ama-Palletizer - ama-Depalletizer
►I-Gluing - Foam
►Ukudlulisa ukushisa ekubunjeni komoya
►Yelula ukubumba kokubumba
►Imibuzo Evame Ukubuzwa
►I-Delta Engineering automation
© Delta-Ubunjiniyela. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Thuthukisa ukusebenza kwakho kahle
Lewebhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi olungcono kakhulu kuwebhusayithi yethu.
Lolu uhlelo olungenazimpawu.
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili lenkampani.
Isixhumanisi sizothunyelwa kuwe ngokushesha.
Abasebenzisi abangaziwa bazoba ngaphansi kokuvunyelwa kuqala.
Aah, LINDA, mina KHUMBULA MANJE!
I-akhawunti yakho yenziwe yasebenza, manje usungangena ngemvume ku-akhawunti yakho.
Sicela uvumele omengameli bethu isikhathi esithile ukuvula i-akhawunti yakho.
Isixhumanisi sakho sokubhalisa sesivele sithunyelwe ku-imeyili yakho. Sicela ubheke ibhokisi lakho lokungenayo nele-Spam. Isixhumanisi esisha sokubhalisa sizokhiqizwa futhi sithunyelwe nge-imeyili ekungeneni kuphela ngemuva 24 amahora
Isixhumanisi sakho sokungena ngemvume esivele sithunyelwe ku-imeyili yakho. Sicela ubheke ibhokisi lakho lokungenayo nele-Spam. Isixhumanisi esisha sokungena ngemvume sizokhiqizwa futhi sithunyelwe nge-imeyili ekungeneni kuphela ngemuva 120 imizuzu
Sicela uqinisekise ikheli lakho le-imeyili ngokuchofoza kusixhumanisi esisithumele ku-imeyili yakho.
Sicela usebenzise i-imeyili yakho ukuze ungene ngemvume.
Kuthunyelwe kuwe imeyili enesixhumanisi sokungena ngemvume.
Ngenxa yezizathu zokuphepha kuzothunyelwa i-imeyili ku . Uyacelwa ukuthi uchofoze isixhumanisi esikule imeyili ukuze uthole ukufinyelela okugcwele kuwebhusayithi.
I-imeyili enesixhumanisi sokubhalisa ithunyelwe kuwe. Sicela ubheke ibhokisi lakho lokungenayo nele-Spam. Isixhumanisi sisebenza 24 amahora.
Isixhumanisi sokungena ngemvume singasetshenziswa kuphela kusuka kukhompyutha evela kuyo.
Amaseva ethu amatasa, sicela uzame futhi emuva kwesikhathi noma usithinte.
Amaseva ethu abuyisele iphutha, sicela uzame futhi emuva kwesikhathi noma usithinte.
Amaseva ethu abuyisele iphrofayili engaphelele, sicela uzame futhi emuva kwesikhathi noma usithinte.
Isixhumanisi sakho sokungena ngemvume siphelelwe isikhathi. Sicela usebenzise i-imeyili yakho ukukhiqiza esinye isixhumanisi sokungena ngemvume.